Macluumaadka Dadweynaha u Furan Lala Barbardhigay Kan Garka Ah | LawHelp Minnesota
Macluumaadka Dadweynaha u Furan Lala Barbardhigay Kan Garka Ah
Macluumaadka Dadweynaha u Furan Lala Barbardhigay Kan Garka Ah (PDF)320.94 KB
Waa maxay macluumaadka taariikhda fal dambiyeedka ee dadweynuhu arki karaan?
Macluumaadka faldambiyeedka qofka lagu helay waxaa laga heli karaa Nidaamka Kombiyuutarada ee Maxkamadaha (MNCIS) iyo Waaxda Dambi Baarista (BCA). Diiwaanka fal dambiyeedka ee BCA waa mid dadweynaha u furan muddo 15 sano ah ka dib marka qofka la xukumo. Laakiin diiwaanada qof lagu helo fal dambiyeedka waa kuwo si joogta ah looga heli karo MNCIS.
Macluumaadka dadweynaha waxaa ka mid noqon kara:
Dambiyada lagugu soo oogay
Taariikhda dambiga lagugu soo oogay
Dambiga ay kugu heshay maxkamad
Natiijada (oo lagu magacaabo go’aan gaaris)
Hay’adda kor kala socoshada ama goobta qofka lagu xiray.
Wax kasta oo maxkamadda laga diiwaan geliyey oo aan laga qarin dadweynaha
Xiritaanka la i xiray ma macluumaad dadweynaha arki karaan?
Tariikhda xariga waa mid aad u adag. Taariikhda xiritaanka waa mid dadweynuhu arki karaan ee saldhiga booliska ama sherifka. Laakiin mar kasta sidaas ma aha. Qeybaha qaarkood waxa ay ka dhigaan mid macluumaadka si fudud lagu heli karo halka aysan kuwo kale ka dhigin sidaas. Ma jiro sharci u degsan arrintaas, ee waa mid ku xiran meesha aad degan tahay.
Waa run in macluumaadka xiritaanka aysan aheyn mid dadweynaha arki karaan BCA LAAKIIN, BCA way u gudbisaa maclumaadka xiritaanka goobaha shaqada iyo mulkiilayaasha guryaha oo fasax u heysta in ay eegaan taariikh nololeedkaaga.
Waa maxay macluumaadka gaarka ah?
Dambiga qof lagu helay oo ay ka soo wareegtay 15 sano tan iyo markii la xukumay waa mid gaar ah BCA laakiin waa mid dadku arki karaan waligood MNCIS.
Qaar ka mid ah qoraalada laga diiwaan geliyo maxkamadda waa kuwo laga dhigo “qarsoodi” sharci ahaan oo aanay arki karin dadweynaha. Qoraaladaas waxaa ka mid ah kuwa maaliyadda ama diiwaanka gaarka ah ee caafimaadka.
Diiwaanka caruurta waxaa loo arkaa inuu yahay mid gaar ah. Waxaa jira waxyaabo ka baxsan taas oo marka ilmaha da’diisu tahay 16 ama ka weyn oo lagu qaaday dambi culus. Xaaladahaas oo kale, waxaa jira dhageysi dadweynaha u furan, xitaa haddii ilmaha lagu qaaday dambiga culus. Diiwaankaas waxa aad ku arki kartaa maxkamadda. Lagama heli karo barta internetka.
Yaa arki kara diiwaanka dadweynaha u furan?
Qof kastaa ayaa arki kara diiwaanka dadweynaha u furan Waxa aad ka heli kartaa xafiiska BCA adiga oo isticmaalaya kombiyuutarada yaala afaafka hore ee xafiiska.
Diiwaanka maxkamadda ee dadweynaha u furan sidoo kale waxaa laga heli karaa barta internetka ee kedyka MNCIS.
Waxa aad Keydka MNCIS ka geli kartaa halkan: http://pa.courts.state.mn.us. Ama Soo booqo www.mncourts.gov.
Guji Access Case Records (Gelitaanka Diiwaanka Dacwadaha)
Guji Minnesota District (Trial) Court Case Search (Baarashada Keydka Dacwadaha Maxkamadaha)
Akhri macluumaadka oo raac tilmaamaha.
Yaa arki kara diiwaanka gaar ah?
Macluumaadka gaarka ah ee qofka waxaa la arki kara oo kaliya oo arki karaan dad gaar ah iyo xaalado gaar ah. Dadka kaliya ee arki kara macluumaadka gaarka ah waa:
Qofka uu khuseeyo macluumaadka gaarka ah. Kaasoo lagu magacaabo qofka looga hadlayo macluumaadka gaarka ah.
Hay’adaha garsoorka ujeedo la xiriirta dacwadaha fal dambiyeedka.
Shaqsiyaadka iyo hay’adaha loo xilsaaray ogaashaha taariikhda fal dambiyeedka.
Qof kasta oo heysta foomka ogolaashaha Informed Consent Form (Foomka Ogolaashaha) uu soo saxiixay qofka leh macluumaadka oo nootayada soo mariyey.
BCA ma sii gudbiso macluumaadka gaarka ee caruurta, xitaa haddii uu ogolaado qofka uu khuseeyo macluumaadka.
Waxa aad BCA kala soo xiriiri kartaa 651-793-2400 oo aad weydiisan kartaa in ay foomka boostada kuugu soo diraan. Ama aad kala soo bixi kartaa barta internetka https://dps.mn.gov/divisions/bca.
Guji Adeegga Dadweynaha “Public Services”
Guji Dadweynaha U Furan iyo gaarka Ah “Public and Private Data”
Guji Foomka Ogolaashaha Informed Consent Form
Akhri xogta urursan Diiwaanka Fal dambiyeedka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.